Jose Mourinho Iyo Jurgen Klopp Kumaa La Hor Ceyrinayaa? Saadaashii Ugu Danbeysay Oo Soo Baxday | Laacibnet.net
Jose Mourinho Iyo Jurgen Klopp Kumaa La Hor Ceyrinayaa? Saadaashii Ugu Danbeysay Oo Soo Baxday
Jose Mourinho ayaa haatan hogaaminaya tartanka tababarayaasha Premier League ee la ceyrinayo ka dib markii Tottenham ay gashay qaab ciyaareed xun.
Spurs ayaa laga badiyay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu danbeysay horyaalka si la mid ah kulankii FA Cup ee Everton iyadoo cadaadiska uu ku sii kordhayo Mourinho.
Waxaa 2-1 kaga badisay kooxda ay London ku xafiiltamaan ee West Ham shalay oo Axad aheyd. Guuldaradaas waxay keentay in Mourinho uu u soo sarre maro saadaasha tababarayaasha qarka u saaran in laga ceyriyo kooxaha Premier League.
Ka hor dhamaadkii sannadkii la soo dhaafay, Tottenham waxay u muuqatay kuwa u tartami kara hanashada horyaalka ka dib waxaa soo wajahay dib u dhac ka tuuray kaalinta 9aad iyagoo xitaa halis ugu jira inay seegaan u soo bixitaanka Europa League iskaba daa Champions League.
Laakiin waxay gaareen finalka Carabao Cup oo ay Man City la ciyaarayaan 25ka bisha April halka ay 4-1 ku badiyeen kulankii lugta hore ee wareega 32da Europa League ee ay la ciyaareen kooxda reer Austria ee Wolfsberger.
Mourinho ayaase haatan hogaaminaya tababarayaasha qarka u saaran in la ceyriyo horyaalka Premier League isagoo ka horeeya macalinka Crystal Palace Roy Hodgson iyo tababaraha Newcastle Steve Bruce.
Waxaa liiska tababarayaasha halisya ku jira ugu hooseeya macalinka Liverpool Jurgen Klopp kaasoo ku guuldareystay xilli ciyaareedkan difaacashada horyaalka islamarkaana kooxdiisa laga badiyay kulankii afaraad ee isku xiga ee ay gurigooda ku ciyaaraan horyaalka.
Saadaashii ugu danbeysay ee ceyrinta tababarayaasha Premier League
Tababare la ceyrinayo ma jiro